Rabbii jedhati Ilaala ERGAA #WBO XOOLLAY JIRURRAA - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsRabbii jedhati Ilaala ERGAA #WBO XOOLLAY JIRURRAA
Ergaa kana akka nuuf dabarsitun karaa saanduqa dhoksaan siif erge!!
Haalli Wbo mooraa xoollayi seenee sodaachisaa ta’aa dhufeera. Innis haalli jaarsolii araaraa koree tekinikaa abbootii gadaa fi mootummaa gidduu jiru maal akka ta’ee waanti mul’ataan hin jiru!! Kunis kan ittin ifuu..
1. Waadaan gaafa mooraa xoollayin seennee nuuf galamee fi abbootii gadaa fi mootummaa gidduutti galame eegamuu hin dandeenye. Kunis ji’atti yeroo lama dhufnee isin ilaallaa, rakkoo keessanis ni furraa kan jedhamee hanga har’atti guyyaa lama koree tekinikaa fi abbootii gadaa eeggannee dhanbeerraa
2.Haalli mooraa xoollayin keessa jiru baay’ee ulfaataa dhufeera kunis kan ittin ifuu…
2.1=Haalli qulqullina nyaataa sirrii miti
2.2=Qorichi ga’aan waan hin jirreef namni baay’een dhukkubaan dararamaa jira
2.3=Qulqullinni mana fincaanii eegamaa miti
2.4=Ho’inni qilleensaa moorichaa humnaa ol waan ta’eef leenjiif haalli mijataan hin jiru
2.5=Erga mooraa seennee guyyoota 13=yoo xumurrees hanga yoonaatti leenjiin nuuf kennamee hin jiru
2.6 =Bakka nyaataattis ta’e iddoo nyaataatti haalli mijataan tokkollee waan hin jirreef sammuun namoota baay’ee jeeqamaadha kanarraa kan ka’e wbon mooricha jiru iddoo garaagaraatti maree godhataa jira
2.6 =Abbootii gadaa fi koree tekinikaa biraas shakkii qabnu guddaa ta’aa dhufeerasababni isaa bara goobanaa daanichii,bara leencoo lataa,bara abishee garbaa yoo ilaallee haalli ittin wbon dararame fi qabsoon uummata oromoo boodatti deebi’ee karaa amma abbootiin gadaa deemaa jiraniin wal fakkaata. Kanarraa kaanee gaafa ilaalluu halli nageenya keenyallee shakkii akka qabu uummatni oromoo fi qeerroon oromoo keessa nuuf haa beeku jedha wbon mooraa xoollayi jiru jedhii bal’isii ibsa godhii qilleensarraa nuuf oolchi!!!!!